SAHATSIHO ANTSIRABE : Lehilahy iray nampiahiahy nahitana basy sy bala ary ody gasy marobe
Nandritra ny sakan-dalana notanterahin’ny Polisim-pirenena avy ao Vakinankaratra dia lehilahy iray nitondra basy sy bala ary ody gasy no tra-tehaka, ny faran’ny herinandro lasa teo iny. 19 octobre 2020
Tao Sahatsiho Antsirabe no nahatrarana io lehilahy io, ny sabotsy 17 oktobra lasa teo.
Basy vita gasy miisa roa niampy bala miisa 12 ary mohara, ody gasy marobe no hita tao anaty sakaosiny rehefa nosavaina. Taksiborosy hiakatra eto Antananarivo renivohitra moa no nosakanana tamin’io fotoana io ka rehefa noahiahiana ralehilahy dia nosavaina avy hatrany ny entany.
Noentina namonjy ny biraon’ny Polisy mba hatao famotorana lalina momba ireo fitaovam-piadiana tratra ireo izy. Fantatra tamin’izany ihany fa 28 taona ity farany ary avy any Ambovombe Androy izy ka hihazo an’i Mampikony izay mbola tsy hay mazava ny tena anton-diany. Mbola eo am-panohizana ny fanadihadiana mahakasika azy io ny mpitandro filaminana ao an-toerana ankehitriny. Anio alatsinainy 19 oktobra kosa no hatolotra ny fampanoavana ny raharaha.